सागर तिवारी - चर्चित् नायक, युवा पुस्ताका धडकन -
सागर तिवारी – चर्चित् नायक, युवा पुस्ताका धडकन
फोटो फिचर मनोरञ्जन मोडल
२०७५, २१ मंसिर शुक्रबार ००:११ March 28, 2020 clickonLeaveaComment on सागर तिवारी – चर्चित् नायक, युवा पुस्ताका धडकन
नायक सागर तिवारी अहिले को युवा पुस्ता को धड्कन र निकै चर्चित् नायक को रुप मा परिचित् छन जस्को नेपाली चल्चित्र को सफल् यात्रा चलचित्र “मेरो पैशा खोई” बाट सुरु भएको थियो। चल्चित्र मा कदम राख्नु भन्दा पहिले उनि रङमन्च मा पनी उतिकै भिजेका थीए। उन्को पहिलो चलचित्र “मेरो पैशा खोई” ले धेरै लोकप्रियता नपाए पनी उक्त चलचित्र बाट सागर ले नेपाली सीनेमा क्षेत्र मा आफ्नो अलगै छाप् छोड्न सफल् भए। सायद उनी रङमन्च बाट आएर होला उन्को अभिनय मा एउटा अलगपन थियो जस्ले गर्दा उनले धेरैलाई फ्यान बनाउन पनि सफल भए।
सागर ले “मेरो पैशा खोई” मा सौगात मल्ल,बर्षा राउत, बुद्दी तामाङ, रोबिन तामाङ जस्ता कलाकार हरु सङ स्क्रिन शेयर गरेका थीए । सागर को राम्रो अनुहार र आकर्शक ब्यक्तित्वो ले गर्दा उनले गरेको भुमिका हरु मा अलगै छाप छोडने गर्दछ।
हालै मात्र सागर ले आफ्नो नेपाली चलचित्र को यात्रा संगै बलिवुड मा पनि कदम राखेका छन जस्को उधाहरण स्वोरुप उनले म्युजिक भिडिओ मा अभिनय गरेका छन जस्को बोल “एकाश तु” रहेको छ। उक्त भिडिओ मा सागर लाई धेरै राम्ररि चित्रण गरीएको छ। समग्र मा उक्त भिडिओ गित को माध्यम बाट उन्को बलिवुड को यात्रा सुरु हुन लागेको जस्तो देखिन्छ।
चलचित्रमा आउनु भन्दा पहिले सागर रङमन्च थिएटर मा कार्यरत थीए जस्मा उन्ले केही नाटक हरु मा पनी काम गर्ने मौका पाएका थीए। सागर लाई सानो उमेर् देखि नै ग्ल्यामर क्षेत्र ले आफु प्रती आकर्सण गरे पछी उन्को परिवार ले उन्लाई प्रोहत्सान गरेका थीए। उन्को त्येहि प्रघाड लगाब लाई देखेर उन्का आमा बुवा ले उन्लाई सोही क्षेत्र मा लाग्न अनुमति दीएका थीए।
उनले भारत को अहमदाबाद मा स्थित लाईभवाएर इन्स्टिट्युट बाट अभिनय सिकेका थिए। सोही समय मा उन्ले भारत मा छदा ईन्डियन फिल्म फेस्टिभल का लागी एउटा छोटो चल्चित्र मा पनी काम गरेका थीए जस्मा उन्को अभिनय लाई धेरै रुचाईेको थियो। उक्त चलचित्र को नाम “बिकाश” रहेको थियो।
सागर्को निजि जिन्दगी को कुरा गर्दा उन्को जन्म ३ अगस्त १९९५ मा भएको थियो। उन्का बुवा प्रशान्त तिवारी एउटा भुतपुर्ब सैनिक हुनु हुन्छ भने अहिले वहा सर्भिसमा हुनु हुन्छ। सागर की आमा बिमी तिवारी गृहणी संगै सागरको म्यानेजर पनी हुनुन्हुन्छ। सागर्की एकजनि बहिनी पनी रहेकी छिन। उन्ले म्यानेजमेन्ट बिषए मा ब्याच्लर् (BCOM) पढेका छन्।
सागर को सुडोल सरिर र उच्च हाईट ले गर्दा उनको ब्यक्तित्व निकै नै प्रभाबशाली देखिन्छ। उचाई को कुरा गर्दा उनको उचाई ६ फिट रहेको छ। सागर लाई मन पर्ने कलाकार हरुमा राजेश हमाल, ह्रितिक रोशन र ह्युज ज्याक्म्यान रहेका छन। सागर को हबिज को कुरा गर्दा उन्लाई गिटार बजाउन र कम्प्युटर गेम हरु खेल्न मन पर्दछ।
सागर को नेपाली चल्चित्र को यात्रा हेर्ने हो भने उन्को यात्रा निकै नै राम्रो देखिन्छ र र उनको लगनसिलता लाई हेर्दा पक्कै पनी उन्को भबिशय उज्जवोल् देखिन्छ। हामी आशा गरौ की आउदा दिन हरुमा सागर को उतक्रिष्ट अभिनय हरु हेर्न पाईयोस र उन्लाई नेपाली चलचित्र को क्षेत्र संग संगै बलिवुड मा पनी सफलता मिलोस जस्ले गर्दा सम्पुर्ण नेपाली ले गर्ब गर्न सकोश। हाम्रो शुभकामना
यस्तो चलचित्र जसले एक हप्तामा नै ८०० करोड रुपैया को ब्यापार गर्यो!!! सम्भब छ त?? पढनुहोस।
रणबिर कपुर को नया चलचित्र शिम्बा मा पुरानो गित “लडकी आख मारे” लाई रिमिक्स गरियो (भिडिओ मा हेर्नुहोस)
भगवान कृष्ण को लिला, खेलै खेल मा कालिया नाग लाई पाठ पढाए, जय कृष्ण ।
२०७५, ८ कार्तिक बिहीबार ००:४९ October 25, 2018 clickon
नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के को चलचित्र “कागजपत्र” को गित “माया सन्शार” सार्बजनिक
२०७५, १६ माघ बुधबार ०६:३३ January 30, 2019 clickon
फिल्म ‘जय भोले’को गीत ‘उम्लियो भने पोखिन्छ’ सार्वजनिक(भिडियोसहित)
२०७५, ३१ जेष्ठ बिहीबार १६:३५ June 14, 2018 clickon